शुक्रबार कसरी गर्ने महाकालीको पूजा र मन्त्र जप ? जान्नुहोस् पूजा विधि र मन्त्र
शुक्रबार देवीको विभिन्न रुपका पूजा आरधाना गर्ने गरिन्छ । आज शुक्रबार कसरी महाकालीको पूजा र मन्त्र जप गर्ने त ? जान्नुहोस् पूजा विधि र मन्त्रको बारेमा केही जानकारी ।
माता कालीकी साधना सन्यासी र तान्त्रिकहरु पनि गर्ने गर्छन् । माता कालीका भक्त मान्ने गर्छन् कि माता काली कालको संम्हार गर्ने र मोक्ष प्रदान गर्ने गर्छिन् ।
शुक्रबार कालीको उपसनाको लागि उनको तस्बिर वा मूर्तिमा स्वच्छ र पवित्र स्थानमा राख्ने र पानीले पखालेर मूर्तिमा तिलको टिका लगाउने र फूल चढाउने ।
बसेर १०८ पटक ऊं क्रीं कालिकायै नमः और ऊं कपालिन्यै नमः भनेर मन्त्र उच्चारण गर्ने । र आफ्नो श्रद्धा र भक्तिको अनुसार भोग चढाउनुहोस् ।
रहस्यमय बन्दै गएको सुन का’ण्डमा काठमाडौंमा थप एक किलो सुन बरामद भएको छ । साढे १४ किलो चाँदी र आधा किलो सुन प्र’करणको अनुसन्धानका क्रममा थप एक किलो सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु बरामद भएको हो । सुन का’ण्डमा मुछिएका उमेश श्रेष्ठकाे डेरामा एक किलो सुन फेला परेको हो ।
बरामद धातु सुन हो वा सुन जस्तो देखिने धातु मात्र भन्ने परीक्षण हुन बाँकी छ । सुन भेटिएको डेरामा साढे १४ केजी चाँदी र आधा किलो सुन प्र’करणमा मुछिएका श्रेष्ठ बस्दै आएका थिए । दरबारमार्गस्थित बस्ने गरेका श्रेष्ठ सुन त’स्करीका सुराक रहेकाे आ’रोप छ ।
जवान श्रेष्ठलाई अहिले दरबारमार्ग वृतको हि’रासतमा राखेर आन्तरिक अनुसन्धान थालिएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले केही दिनअघि सुन जस्तै देखिने १५ किलो उक्त धातु र २ थान पे’स्तोल बरामद थियो ।
तर साे धातु परीक्षणका क्रममा १४ केजी चाँदी र आधाकिलो सुन भएकाे पुष्टि भएकाे थियाे । शं’कास्पद रुपमा हिडिरहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले दरबारमार्गबाट पछ्याउदै गर्दा झोला फ्यालेर भागेका थिए । यस सम्बन्धमा अझै थप अनुशन्धान भइरहेको छ ।